एनआरएनए Archives - Lokpati.com
Tag - एनआरएनए
काठमाडौं, २ कात्तिक । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन्।शनिबार नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सम्मान तथा बधाई दिन...
एनआरएनए निर्वाचन : कुन पदमा काे निर्वाचित ? (सूचिसहित)
काठमाडौं, १ कात्तिक। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को नवौँ विश्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्वाचन सकिएकाे छ। निर्वाचन सकिएसँगै हिजाे शुरु भएकाे मतगणना पनि आज बिहान सकिएकाे छ।
निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा कुमार पन्त विजयी...
काठमाडाैं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मतगणना अहिले जारी रहेकाे छ। अहिलेसम्मकाे मतगणनामा कुमार पन्त अगाडि रहेका छन्। एनआरएनए स्रोतका अनुसार, पन्तले आफ्ना प्रतिस्पर्धी कुल आचार्यलाई ७० मतले पछि पार्दै अग्रता लिएका...
काठमाडौं, १ कात्तिक। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मतगणना कार्य भइरहेकाे छ। अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मतगणना सकिएको बताइएकाे छ । यद्यपि, निर्वाचन समितिले यसको आधिकारिक जानकारी भने दिइसकेको छैन ।
बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको...
एनआरएनए मतगणनास्थलमा हंगामा !
काठमाडौं, १ कात्तिक। विभिन्न विवादकाबीच सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनावपछि पनि मतगणनास्थल बाहिर हंगामा भएको छ ।अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य र उनका प्रतिनिधिलाई मतगणना भएको स्थलमा छिर्न नदिएकोमा उनका...
एनआरएनए चुनाव : मतदानमा धाँदली भन्दै फेरि विवाद
काठमाडौं, ३० असाेज। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मतदानमा धाँदली भएको भन्दै फेरि विवाद भएको छ । फर्जी मत खसेको दाबी गर्दै केही प्रतिनिधिहरुले विरोध गरेपछि उक्त विवाद शुरु भएको हो ।
नक्कली परिचय पत्र बनाएर मतदान गरिएको भन्दै...
एनआरएनएको चुनावमा नारावाजी र ताेडफाेड, मतदान स्थगित
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नयाँ नेतृत्वका लागि सुरु भएको मतदान स्थगित भएको छ । चुनावमा भोटिंङ मेशिन ब्रिग्रिएपछि आज विहान १० बजे सम्मको लागि मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयुक्त शिव रिजालले जानकारी दिए...
एनआरएनए निर्वाचन: पन्त र आचार्यको प्यानलमा को-को ?
काठमाडौं, २९ असोज। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज काठमाडौंको हायात होटलमा निर्वाचन हुँदैछ। संघको नवौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४२ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुन...
एनआरएनए राजनीतिक समूहजस्ताे बन्याेः उपेन्द्र महतो
काठमाडाैं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको राजनीतिक अन्तरविरोध छताछुल्ल भएको छ। संघको मंगलबारदेखि काठमाडौंमा जारी नवौं महाधिवेशनमा अधिकांश उम्मेदवारहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको भन्दै यसका केही अभियन्ताहरूले...
एनआरएनए निर्वाचनः उम्मेद्वारी शूल्क १० लाखसम्म, कुन पदका लागि कति ?
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा सम्भवतः नेपालकै सबभन्दा बढी उम्मेद्वारी दर्ता शूल्क तोकिएको छ । संघको आज हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दर्ता शुल्क रु एक लाखदेखि १० लाखसम्म तोकिएको संघका प्रमूख निर्वाचन...
नेकपा सचिवालय बैठक सुरु : ओली समूहमा मत बाझियाे
ओलीको मात्रै दोष देख्नु गुटगत मानसिकता होः शंकर पोखरेल
फेसबुक एकाउन्ट ह्याक गरेर पैसा ठगी गरेको आरोपमा दुई पक्राउ
छुट्टाछुट्टै स्थानमा सवारी दुर्घटना : १२ जनाको मृत्यु